पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि दुवै पदबाट नहट्ने प्रधानमन्त्री ओली ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि दुवै पदबाट नहट्ने प्रधानमन्त्री ओली !
पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि दुवै पदबाट नहट्ने प्रधानमन्त्री ओली !
काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट राजीनामाको दबाब आए पनि उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट बाहिरिने सम्भावना छैन । उनले राजनीतिक रूपमा नै दबाबको सामना गर्ने गरी आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनी निकटकाले बताएका छन् ।
दुवै जना पार्टी अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय आधिकारिक नहुने पार्टी एकताको क्रममा भएको समझदारीले उनलाई दुवै पदमा टिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रियताका पक्षमा ओलीले देखाएको अडानले पनि उनको पक्षमा छुट्टै माहोल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानमा राख्न सफल भएका थिए ।यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली जन कलाकार जेवी टुहुरे! कसरी भयो निधन?